ရွှေအိမ်စည်မေ: သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .
သူများ gmail acc က mail ကို ကိုယ့် မေးလ် ထဲမှာ ဖတ်ရအောင် .
ကိုယ့်ကို သူက password ပေးထားတယ် အဲဒါကို နောက်ကျရင် သူကလည်း သူ့ password ကလေးကို ပြန်ပြောင်းတော့မယ် .. ဒါပေမယ့် ကိုယ်က သူ့ဆီ က ၀င်လာတဲ့မေးလ် တွေကိုကလည်းဖတ်ချင်သေး .. အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနည်းကလေးက အသုံးဝင်ပါတယ် ...ဒီနည်းက G mail မှ မဟုတ်ပါဘူး.. နောက်ထပ် တခြား yahoo တို့ ဘာတို့ကိုလည်း ရပါတယ် Password သိရင် ပြောတာပါ .... ကျွန်တော် ပြောတဲ့ နည်း က သူ့ရဲ့ password ကို သိမှ ရမှာပါ ဗျာ ... မသိရင်တော့ မရပါဘူး ... သိခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်က နည်းလေး အတိုင်းလေး စလိုက်ကြရအောင် ...ကိုယ့် gmail ကိုဝင်လိုက်ပါ ... ပြီးရင် setting ကိုသွားလိုက်ပါ ... ပြီးရင်တော့ account ကိုသွားလိုက်ဦးနော် ...get mail from other account ကနေပြီးတော့ addaanother account ကို click လိုက်ပါ ... အဲဒီ မှာ ကိုယ် လုပ်ချင်တဲ့ account address ကို ထည့်လိုက်ပါ..ပြီးရင်တော့ နောက် ထပ် တစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. အဲဒီမှာ password ကလေးကိုဖြည့်လိုက်ပါ ပြီးရင် label in incoming massage ဆိုတာလေးကို အမှန် ခြစ်ကလေး ပေးထားလိုက် နော် .. အိုကေ ပြီးရင် add account ဆိုတာ ကို ပေးလိုက် .. အဲလာ ဆိုရင် gmail ကနေပြီးတော ကိုယ် နောက်ထပ်ထည့်ထားတဲ့ account ကနေပြီးတော့ ရှိသမျှမေးလ်တွေကို ကိုယ့် account ထဲကို ဆွဲထည့်ပေးလိမ့်မယ်နော် ... အဲဒီ account ကမေးလ်တွေကိုကြည့်ချင်ရင်တော့ Travel ဆိုတာရဲ့ အပေါ်မှာ ကိုယ် စောစောက ထည့်ထားတဲ့ account ကလေးကို တွေ့လိမ့်မယ် .. အဲလာကလေးကို နှိပ်လိုက် .. တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဗျာ .. အဲ ဒီ account က မေးလ်တွေ အားလုံးကို ... အဆင်ပြေပါစေဗျာ .... ပြီးရင်တော့ အချိန် ကလေး နည်းနည်း စောင့်လိုက်နော် သူက checking gmail ဆိုပြီးတော့ နောက်ပိုင်း အဲဒီ မေးလ် ထဲက မေးလ်တွေ ကို ယူပေးလိမ့်မယ် .
. မောင်လုလင်ဘလော့မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။။။
Posted by ရွှေအိမ်စည် at 5:13 AM Labels: နည်းပညာ